Kugadziriswa kwemalaptops akanakisa ane preinstalled GNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kugadziriswa kwemalaptops akanakisa ane preinstalled GNU / Linux
Vanozoziva kana vanga vachida tenga laptop neLinux Iko hakuna makomputa mazhinji pamusika anouya asina chero pre-akaiswa mashandiro ekushandisa kana kuti kuwana komputa isina Windows zvakafanana nekutsvaga tsono mudura rehuswa, kunyangwe paine kuwanda kuri kuwanikwa kwemakomputa aya. Neraki takaona mafambiro akaita seSpanish VANT neSlimbook akapfuura, uye mamwe ekune dzimwe nyika akadai seSystem76 uye mamwe emamwe mafemu makuru anga achida kuvhura mamwe macomputer nesarudzo yekuve neLinux. Iwo anobva kuUAV neSlimbook ari nyore kuuya pano, asi mamwe akaita seSystem76 akaomesesa, ayo anotadzisawo zvakasiyana.
Pasina kupokana, sarudzo yakabudirira kwazvo yave yeku Google, ine maCbookbook ayo, iyo yanga iri imwe yemakomputa anotengesa zvakanyanya eAmazon uye ave akatengeswa kunze kazhinji nekuda kwekuda kwavo kwakanyanya, asi ChromeOS haisi GNU / Linux, asi asi Linux-based Google inoshanda senge Android uye haina kugutsa vakawanda. Naizvozvo, kunyange hazvo yakatengeswa zvakanyanya, haisiyo mhinduro yanga ichitsvakwa nevazhinji vedu, nekuti nguva zhinji tinofanirwa kugadzirisa kuti titenge komputa yeWindows, kubhadhara Microsoft rezinesi uyezve kupedzisa kubvisa OS yayo .. Kana dzimwe nguva tenga Mac kubva kuApple woisa Linux, inova inodhura zvakanyanya.
Uye kune dzimwe nzira dzekusaita izvozvo, asi ini ndinofunga ivo vachiri vasina kukwana zvakakwana mune dzimwe nguva, zvakachipa mune vamwe kana kuti pane sarudzo yakawanda senge patinotaura nezve malaptop ane Windows ... Asi pano tiri kuzopa chinzvimbo che sarudzo dzakanakisa neLinux maererano nemalaptop:
Slimbook pro: iri laptop ine dhizaini yakanaka, ine mhando yealuminium inopedza senge zvese zvishandiso zveSlimbook. Izvo zvakanaka kuti ushande pamwe uye kutakurika kwayo kwakanyanya nekuda kwekudzikira kwayo ukobvu, huremu uye saizi, sezvo iri 13 ″. Inogona kusiyana pakati pe € 699-889 zvichienderana nesarudzo yakasarudzwa, iine Intel i3, i5 uye i7 processor, DDR4 memory kusvika 32GB, SSD uye kunyange kusarudza yechipiri magineti hard drive kana SSD, nezvimwe. Iyo inoshanda sisitimu ndeyekusarudza pakati peyaunofarira distros ...
Slimbook ExcaliburKana izvo zvaunoda iri yakati kurei laptop, iyi ine 15,6 ″ skrini, asi ichiri inochengetedza yakanaka aluminium dhizaini uye ine simba rakanyanya Hardware, nekuti zvakare inosanganisa yakatsaurirwa NVIDIDA 940M graphic. Mutengo, zvisinei, wakachipa pane wepfuura, kubva ku799-879.
System76 Lemur- Ndiyo imwe laptop yakatengwa pa649, iine 8GB ye RAM, Intel's Core i7, 4K, nezvimwe. Asi ine dambudziko hombe, uye ihwo hupenyu hwebhatiri, hwakadzikira zvakanyanya kana uchifanira kupa simba rakanyanya ...
Dell XPS 13 Yekuvandudza Yekutsikisa: isu takatotaura nezve ichi chishandiso chinodarika € 1000 mumutengo. Iyo ine dhizaini yakanaka (yakapedziswa nemusanganiswa wecarbon fiber, aluminium uye magnesium) uye iri compact, iine kuzvitonga kwakanaka. Iyo Hardware yakanaka kwazvo, asi iko kushaikwa kunowanikwa mune anosanganisira madoko ... chete Thunderbold, SD kadhi kuverenga uye maviri USB 3.0 madoko, inovhara izvo zvakakosha zvido, asi izvo zvinowira zvishoma kune vamwe vashandisi.
15: ndeimwe isingaremi Laptop ine 15-IPS skrini uye 5th Gen Core i7 kana Core i7 inosarudzwa nemushandisi. Mutengo waro wakachipa, uine € 692 sehwaro zvichienderana nezvauchazowedzera. Kunyangwe tikasarudza iyo yepamusoro yekugadziriswa, ine Core i7 7500L pa2.7Ghz, 32GB yeDDR RAM, 240GB SSD + 2TB HDD, mutengo wacho unosvika ku € 1169. Pakati pe-pre-installed operating system, tinogona kusarudza Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, uye Linux Mint.
Sezvandambotaura, kune dzimwe nzira, dzakawanda uye nekuwedzera uye zvirinani, asi ndinoshuva dai paine zvimwe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Kugadziriswa kwemalaptops akanakisa ane preinstalled GNU / Linux
Pindura Vagner Rener
Zvakanaka, ini ndave kutoenda kune yangu yechipiri laptop ine pre-yakaiswa gnu / linux, yekutanga iyo yatove nemakore ayo ekuzvarwa, dell inspiron ine ubuntu (kugara uchigadzirisa iyo wifi kadhi yakapa rimwe dambudziko, asi zvimwe zvese zvaive zvakanaka ), uye mwedzi yakati wandei yapfuura ndakavandudza laputopu yangu kune slimbook katana ne kdeneon :) inofara kwazvo nazvo uye inokurudzirwa zvikuru, ruzivo rwekuhwina kiyi inouya ne tux haina mutengo…. :)
Arthur Matheus akadaro
Ini ndinoshandisa VIT-M2420, kwemakore mashanu neKanaima GNU / LINUX pre-yakaiswa, uye yakandiitira pasina dambudziko, nanhasi kambani inoramba ichinditsigira pese pandino gadziridza distro kune iyo nyowani vhezheni izvozvi 5
Pindura kuna Arturo Matheus
Ndine Asus Rog Strix ine Endless pre-yakaiswa senge iri mune iyi link https://www.pccomponentes.com/asus-rog-strix-gl753vd-gc032-intel-core-i7-7700hq-16gb-1tb-256gbssd-gtx1050-173
Pindura kuna Alonso